Xildhibaan Fiqi Oo War Kasoo Saaray Dagaalladii Maanta - Caasimada Onl...
Bacaadweyn (Wararka Maanta) – Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Galmudug ay maanta kula wareegeen dhowr deegaan oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug.
Wasiir Fiqi ayaa sheegay inay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaano ay ka mid tahay Bacaadweyn, isla markaana ay ku wajahan yihiin deegaano kale oo ay ka mid tahay Camaara oo ku jirta gacanta Al-Shabaab, taas wax ka yar 15-KM u jirta magaalada Bacaadweyn.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ayaa waaberigii hore ee saakay si nabad ah kula wareegay deegaanada Bacaadweyn, Sabeyno-gowrac iyo Qaycad, kadib markii ay isaga baxeen Al-Shabaab oo maamulayey waayihii dambe.
Warbaahinta Al-Shabaab ayaa gabal dhicii galabta baahisay in kooxdu ay dib ula wareegtay deegaanka Qaycad oo ka mid ah deegaanadii laga xoreeyey saakay, balse ma jirto cid ka madax-banaan oo weli xaqiijisay sheegashadooda.
Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo la hadlayey BBC ayaa sheegay in howlgalkaan uu guuleystay, isla markaana madaxda Galmudug aysan u kala hari doonin xoreynta deegaanada ay gobolladaas ka maamulaan Al-Shabaab.
“Howlgalkaan waxaan qorsheyneynay in mudo ah, Galmudug culeys badan ayey soo sareen Al-Shabaab, waxaana ku guuleysanay qabashada deegaanadii aan saakay ku dhaqaaqnay, ciidankeenu waxay kaabiga ku hayaan Camaaro, howlgalkaana waa balaaran yahay, waxuu ka socdaa inta ka dhaxeysa bariga Gurceel illaa Bacaadweyn,” ayuu yiri Fiqi.
Wasiir Fiqi oo sii hadlaayey waxa uu yiri, “Howlgalkaan waa mid dhameystiran madaxda Galmudug oo uu ugu horeeyo madaxweyne Qoor Qoor aysan u kala harin, wasiirrada iyo maamullada degmooyinka ayaa qeyb ka ah, marka howlgal noocaan oo kale ah horay nooma soo marin, waxaana dooneynaa in cadawgaan nasoo beegsaday aan sabab u noqono in guud ahaa dadka Soomaaliyeed ay iska xoreeyaan.”
Wararka Maanta : Deg Deg: Farmaajo oo ku faanay Awooda Militeriga Somalia iyo Dagaalka...
Wararka Somali54 mins ago